Ihoseyili yaseLwandle iVoltage ePhakamileyo, iFlame Retardant kunye ne-Anti-Static yokuhanjiswa kwe-oyile kuMvelisi kunye noMboneleli |JL
I-Polyurethane Marine Hose Inezi mpawu zilandelayo zilandelayo
1. Ubunzima obulula.
2. Ukuguquguquka okuhle, ukugoba kwamahhala, akukhawulelwanga ngendawo yokusebenza.
3. Ukuxhathisa okulungileyo kuxinzelelo olulungileyo kunye nolubi.
Uxinzelelo olusebenzayo lunokufikelela kwi-4.2mpa kwaye uxinzelelo olubi lunokufikelela kwi-0.1MPa.
4. Ukumelana nobushushu obuhle.
Ubushushu benkonzo bu-40℃ukuya +70 ℃, kwaye iithumbu umzimba awuyi kuqina okanye uthambe ngenxa yokutshintsha kwemozulu okanye ubushushu benkonzo.
5.Inokumelana ne-oyile elungileyo kunye nokunganyangeki kwemichiza.
Isetyenziswa kakhulu ukuthutha i-oyile ekrwada, i-oyile yamafutha, i-oyile yokutya, izinyibilikisi zeekhemikhali kunye nerhasi yepetroleum enyibilikisiweyo.
6. Inomsebenzi olungileyo wokuthumela ngaphandle kwe-electrostatic.
Xa uthutha ioli kunye neendaba ezinokutsha, umbane othile we-static uya kuveliswa ngenxa yoxinzelelo, izinga lokuhamba, ukuxutywa kunye nezinye izinto.Ukuba ayithunyelwa ngaphandle ngexesha, iziphumo aziyi kucingelwa.Imveliso ixhaswa kwaye idibaniswe yintsimbi yangaphakathi nangaphandle yentsimbi ephindwe kabini, ene-conductivity egqwesileyo kunye nokusetyenziswa okukhuselekileyo nokuthembekileyo.
7. I-hydraulic shrinkage yokubumba intloko, ukutywinwa okulungileyo.
Kwicandelo lokudibanisa lomzimba wombhobho kunye ne-flange yale mveliso, inkampani yethu iye yatshintsha indlela yokuzalisa i-epoxy resin yendabuko, kwaye ithatha izixhobo ezinkulu ze-hydraulic ukwenza intloko ye-shrink ngexesha elinye.Xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo, ukusebenza kokutywinwa kukuhle, ukubonakala kuhle, kwaye ukudibanisa akuyi kuwa ngenxa yokunyuka ngokukhawuleza koxinzelelo.
8. Ukumelana nokugqwala okuqinileyo kwamanzi olwandle.
Ngenxa yeemeko ezahlukeneyo zokusetyenziswa, kunzima kwimathiriyeli yentsimbi jikelele ukumelana nokudleka kwamanzi olwandle kunye nomoya kwindawo yokusebenza elunxwemeni okanye kude nonxweme.Ngokwale mpawu yendalo esingqongileyo, inkampani yethu iphuhlise uhlobo olutsha lwethumbu elinganyangekiyo kumanzi olwandle, eliphindaphindwe ngaphezulu kwe-10 lokumelana nomhlwa kwithumbu eliqhelekileyo (ingqinwa ngovavanyo lokuba isetyenziswe elwandle iminyaka emi-3 ngaphandle kokubola. ).Ixabiso liphantsi kakhulu kunelo le-hose yensimbi engenasici, enoqoqosho kwaye iyasebenza.
Iimpawu zokusebenza ze-polyester TPU hose
Uhlobo lwepolyester TPU umbhobho: inobushushu obuphezulu bomatshini, ukumelana nokunxiba kakuhle, ukuxhathisa kwe-oyile, ukuxhathisa kwe-oyile, ukuxhathisa i-oyile kunye nokunganyangeki kwe-solvent, ukusebenza kobushushu obuphezulu, ukuxhathisa okugqwesileyo kwe-UV kunye nokuzinza kwe-hydrolysis.I-polyester TPU series hose iyacetyiswa kwizicelo ezineemfuno ezingentla;
Ukusetyenziswa kunye nokuguquguquka kobushushu obuphantsi, ukumelana nemozulu elungileyo, ukuxhathisa i-hydrolysis kunye neemfuno zokuzala kweebhaktheriya, i-polyether TPU series hose iyacetyiswa;
Uhlobo lwePolycaprolactoneTPU umbhobho: ayinayo kuphela amandla omatshini kunye nokusebenza kobushushu obuphezulu bohlobo lwe-polyester ye-TPU, kodwa inokumelana ne-hydrolysis kunye nokumelana nokushisa okuphantsi kohlobo lwe-polyether ye-TPU, kwaye inokuqina okulungileyo, ngoko ifanelekile ukusetyenziswa kumashishini akhethekileyo.
Ngaphambili: I-China i-ODM Ixesha elinye Lenza i-Polyurethane enamacala amabini- -Ababoneleli beHose abaThumela ngaphandle - iPolyurethane High Pressure Drainage Hose ukwenzela uSetyenziso lwezeMigodi - JL
Okulandelayo: IiNkcazo ezahlukeneyo kunye neSiqhagamshelo seHose yoMlilo oSetyenzwayo